विष्पोटयुक्त बम समातेर फाल्ने प्रहरी हवल्दारलाई गृहमन्त्रीले दिए यस्तो 'सरप्राइज' सम्मान !
ARCHIVE » विष्पोटयुक्त बम समातेर फाल्ने प्रहरी हवल्दारलाई गृहमन्त्रीले दिए यस्तो 'सरप्राइज' सम्मान !
तुलसीपुरस्थित मतदान केन्द्रमा लक्षित गरी प्रहार गरिएको बम हातले समातेर सयौ नागरिकको ज्यान बचाउने प्रहरी हवल्दार दुर्गाबहादुर रानालाई गृहमन्त्री प्रभाकरले सम्मान गरेका छन् । सरप्राइज रुपमा उनले बढुवा पाएका छन् ।
हवल्दारवाट उनि असईमा बढुवा भएका छन् । आफ्नो ज्यान जोखिममा राखेर सयौ नागरिकका ज्यान बचाउने हवल्दार रानालाई पुरस्कार स्वरुप प्रहरी प्रधान कार्यालयले बढुवा गरेको प्रहरी प्रवक्ता सर्वेन्द्र खनालले बताए ।
दोस्रो स्थानीय तहको निर्वाचनमा हवल्दार राना दाङमा खटिएका थिए । उनी मतदाताको सुरक्षामा खटिएका बेला अज्ञात समुहले बम प्रहार गरेको थियो । मतदाताको बीचमा फालिएको बम हवल्दार रानाले मातेर जंगलतिर फालिदिएका थिए । रानाले देखाएको सहासको चौतफी श्रहाना भएपछि गृहमन्त्री जनार्दन शर्माले मन्त्रालयमै बोलाएर धन्यवाद पनि दिएका थिए ।
सल्यान घर भएका रानालाई बढुवा गरेको छ ।